Budata Messenger for WhatsApp maka Ios
Budata Messenger for WhatsApp
Ikpo okwu: Ios Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Ios
Budata Messenger for WhatsApp,
Site na ngwa Messenger maka WhatsApp, ị nwere ike iji ngwa WhatsApp na ngwaọrụ iPad gị.
Ebe ọ bụ na anaghị akwado ngwa WhatsApp na ngwaọrụ iPad, enwere m ike ịsị na ndị ọrụ chọrọ iji ngwa na mbadamba nkume ha nwere ndakpọ olileanya. Enwere m ike ịsị na Messenger maka WhatsApp, nke emepụtara dị ka ngwọta maka nsogbu a, bụ otu nime ngwa ndị m nwetara nke ọma na ụkpụrụ ọrụ ya. Ngwa, nke na-arụ ọrụ notu ụzọ ahụ dị ka Weebụ WhatsApp, na-enyere gị aka ịkparịta ụka nụzọ dị mfe site na mbadamba gị.
Ntinye nke ngwa ahụ agaghị abụ ihe ị na-amabughị, ma ị ga-enwe ike ijikwa ya ngwa ngwa. Mgbe emechara ngwa ahụ, ị ​​mepee ngwa WhatsApp na ekwentị gị. Ị nwere ike ịga na webụ WhatsApp, nyochaa koodu QR na iPad wee gaa nihu na-eji ngwa dakọtara na iPad gị. Ọ bụrụhaala na enweghị nsogbu na njikọ ịntanetị na ekwentị gị, ị nwere ike iji udo nke obi gaa nihu na mkparịta ụka gị.
Ị nwere ike ibudata Messenger maka ngwa WhatsApp emepụtara maka ngwaọrụ iPad nefu.
Messenger for WhatsApp Ụdịdị
Ikpo okwu: Ios
Mmepụta: Guglielmo Faglioni
UC Browser, otu nime ihe nchọgharị kachasị ewu ewu maka ekwentị mkpanaaka, eruola kọmputa na ngwa...
Ndewo Agbata Obi 2 dị na Steam! Ndewo Agbata Obi 2 Alpha 1, otu nime egwuregwu egwu egwu kacha mma...
PES 2021 Lite dị maka PC! Ọ bụrụ nị na-achọ egwuregwu bọọlụ nefu, eFootball PES 2021 Lite bụ...
Edepụtara onye nrụpụta egwuregwu nọọrọ onwe ya Rovio, Angry Birds bụ egwuregwu na -atọ ụtọ ma dịkwa...
Secret Neighbor bụ ọtụtụ egwuregwu nke Hello Agbata Obi, otu nime ihe kachasị egwu na egwu egwu...
Drawboard PDF bụ onye na-agụ PDF nefu, PDF mmezi mmemme maka ndị ọrụ kọmputa Windows 10. Ọ bụ ama...
Rockstar, onye okike nke usoro GTA, wepụtara Tanya Nchekwa onwe 5, egwuregwu ikpeazụ nke usoro GTA,...